Ester Ledecká dia manana volamena ZOH 2018 | Tendrombohitra goavam-be, Tendrombohitra Jizera, Paradisan'i Bohemia
HomeEster Ledecká dia manana volamena ZOH 2018
Ester Ledecká dia manana volamena ZOH 2018
Fahagagana, mahagaga, mahatalanjona. Toy izao ny fandresen'ny Eglizy an'i Ester Ledecká ao amin'ny sipa slalom. Ny mpifaninana Czech no tonga tany Korea mba hiady ho an'ny volamena eo am-pandalovana, fa efa nasiaka tamin'ny skiing. Nandritra ny zato taona faharoa dia nasiany an'i Anna Veith avy any Aotrisy ary nahazo volamena.
Ao Pyeongchang Ledecká County dia efa mahatonga tantara isika, raha ny voalohany teo amin'ny tantaran'ny Lalao Olaimpika nanatrika ny foko ny ski sy miomana hanala tamin'izany andro izany teo amin'ny Snowboard.
Ester Ledecká(* March 23, 1995 Prague) dia mpilalao raketa Snowboard any Czech, natokana ho an'ny alpine Alpine, ary mpihinana alpine. Amin'ny Lalao Olaimpika Winter 2018dia nandresy ny ekipa slalom vehivavy ho alika mpihinana alemana voalohany mba handresena ny hazakazaka Olaimpika. Tany Pyongyang, izy koa no lasa mpitaingina voalohany teo amin'ny tantara mba hanomboka amin'ny lalao olaimpika amin'ny sehatry ny ski sy ny snowboard.Amin'ny rivodoza, izy dia tompondaka indroa amin'ny tontolon'ny paradisa sy parallèle goavam-paritra ary tompon-daka eran-tany.
Ny rainy dia mpihira sady mpanoratra Janek Ledecký ary izaho no rain'ny mpilalao hockey mpilalao Hockey Jan Klapac. Ny zokiny lahy Jonas Ledecký dia mpanao asa-tanana. Izy dia mianatra ny sekolim-pampianarana tany Prague ao Copenhague.
Tao anatin'ny taona 2016 sy 2017, nahazo ny loka fotsy White King ny Mpanjaka White.
Izany dia roa izao tontolo izao zandriny tompon-daka amin'ny snowboarding hatramin'ny fifaninanana in 2013 nahazo firazanana ao amin'ny mifanitsy slalom sy mifanitsy goavana slalom. Amin'ny mifanitsy slalom an'ny in 2013 10 teo amin'ny vehivavy tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao. Tao amin'ny Slovenian dia nahazo ny 18 i Rogle. 2014 sambany tamin'ny hazakazaka fiadiana ny amboara eran-tany.
Any amin'ny World Championships in Freestyle tia manao ski ambony sy snowboarding slalom 2015 mifanitsy amin'ny vehivavy rehefa mitondra fiara tsara Mihazakazaha amin'ny fifanintsanana, izay rehefa afaka roa firazanana nankany amin'ny farany 2. toerana, nahomby tamin'ny tohana manaraka. Ny valo-dàlana resy Tomoko vehivavy Japoney ao amin'ny quarterfinal Takeučiovou fandresena Yekaterina Tuděgeševovou avy any Rosia tao amin'ny semifinals resy Aotrisy racer Marion Kreinerovou ao amin'ny lalao famaranana taorian'ny fahadisoana Aotrisy racer Julie Dujmovitsovédojela malalaka sisiny ka hatramin'ny farany, ary nahazo ny medaly volamena. MS 2017 nahazo volamena amin'ny mifanitsy goavana slalomary vola amin'ny slalom parallèle.
Previous post Lalao Olaimpika 2018 Pyongyang ao Korea Atsimo
Next lahatsoratra ZOH 2018, Ester Ledecká dia manana volamena faharoa